Qaxootiga Suuriya oo dib u dejin loo sameynayo - BBC Somali
Qaxootiga Suuriya oo dib u dejin loo sameynayo
10 Disembar 2014
Image caption Sawir laga qaaday xero qaxooti oo ku taalla dalka Urdun
Hay'adda Qaramada Midobay u qaabilsan Qaxootiga ayaa sheegtay in wadammada reer Galbeedka ay ballan-qaadeen inay kordhin doonaan tirada qaxootiga Suuriya ee ay ogolaadeen in dib u dejin u sameeyaan, iyagoo gaarsiinaya ilaa iyo 100,000.
Ballan-qaadka ayaa yimid gabagabada shir yabooh ah oo ka dhacay magaalada Geneva, shirkaasi oo intii uu socday ay hay'adaha gargaarka sida Oxfam iyo Save the Children ay ka codsadeen wadammada qaniga ah inay qaataan boqolkiiba 5, ama 180,000 oo qof, kuwaasi oo ah kuwa ugu taagta daran qaxootiga ka soo cararay Suuriya.
Inta badan qaxootiga Suuriya ee korka u dhaafaya 3-da milyan ayaa hoy ka dhigtay wadammada dariska ee Lubnaan, Urdun ama Turkiga.
Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay inay soo dhaweyneyso baaqa dib u dejinta cusub balse waxa ay sheegtay inay rajeyneysay intaas in ka badan.
Madaxa hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga, Antonio Guterres, ayaa qiray in baahida ay intaasi ka badan tahay.
Mareykanka iyo Britain ayaanan midna bixin tiro rasmi ah, sidoo kalana dowladaha Gacanka Carbeed ayaanan iyana bixin, Qaramada Midoobayna arrintaasi waxa ay ku keenaysaa niyad jab gaar ah, maadaama ay si adag ugu ololeysay arrinta.